Nwere ike ị beụ mmanya na igwe kwụ otu ebe? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Runkụbiga mmanya ókè - a ngwọta pragmatic
Runkụbiga mmanya ókè - a ngwọta pragmatic
Nwere ike ị beụ mmanya na igwe kwụ otu ebe?
Ọ bụ iwu na-akwadoghị na-agba ịnyịnya gịigwe kwụ otu eben'okpuru nduzi nkeụọ ihe ọ .ụ .ụma ọ bụ ọgwụ ọjọọ, naị ga-emeikpe mara ihe a ma ọ bụrụgịerughị eru ịgba ịnyịnya ruo n'ókègịenweghị ike ịchịkwa nke ọmaigwe.Would ga-na-emejọ magịnọ n'okporo ụzọ ụkwụ ma ọ bụ n'okporo ụzọ.Dec. 13 2019
10 Thezọ Nzuzu Dị Iche Iche Ndị Mmadụ Nwụrụ n'Ezie Gịnị Na-eme Ọnwụ Nwee Isi? Ọ bụ ihe na-amaghị nke ọma? Ka ọ bụ naanị akara ọjọọ nke chi ọjọọ? Ọnwụ ga-abụ nchikota nke ọdachi, ihe na-atọ ọchị na nke a na-adịghị ahụkebe. Ọnwụ ụfọdụ na-eme ozugbo, ndị nke na-eju gị anya. Ọnwụ ndị a nwekwara ike ịghọta ma ọ bụrụ na ha enweghị nzuzu.
ọrụ kacha mkpa nke iku ume bụ
Olee kpam kpam, nzuzu nzuzu. Ọnwụ ndị a na-emekarị n'ihi na ndị mmadụ anaghị akpachapụ anya ma ọ bụ na ị ma ụma tinye onwe gị n'ọnọdụ ndị dị egwu. Hey ụmụ okorobịa, nabatanụ ọzọ ihe omume nke Nọrọ Mara Ihe.
N’isiokwu nke taa, anyị ga-elele ụzọ iri kacha nzuzu ndị mmadụ jiri nwụọ. Echefula ịpị bọtịnụ dị ka ma denye aha na ọwa anyị ma ọ bụrụ na i nwebeghị! Ọ dị mma, ka anyị banye n'ime
Number 10 - bombu Selfie Enwere ụfọdụ ihe ị na - ekwesịghị ọgbaghara, otu ihe ndị a nwere ike ịbụ ihe mgbawa dị egwu. Mụ nwoke abụọ na-eme njem na Russia mgbe ha hụrụ bọmbụ dị ndụ; grenade ahụ ka amịpụtara na mberede na ọnọdụ a, nke pụtara na bombu ahụ nwere ngwa ọgụ ma nwee ike ịgbawa ngwa ngwa. Ihe mere na ọ bụghị gbawara ugbua bụ a usoro malfunction; N'agbanyeghị nke ahụ, ọ bụghị nchekwa iji bulie ya.
Nọmba nke 9 - Michael Godwin Ebu ụzọ gbuo ya, mana mgbe mgbanwe nke ikpe ya bịara wee maa ya ikpe ịga mkpọrọ nke ndụ, mgbanwe ọ happinessụ, ma ọ bụ opekata mpe ọ gaara adị. Ndụ n'ime ọnụ ụlọ mkpọrọ ya dị mma ruo otu ụbọchị ọ chọpụtara na telivishọn o nwere na ya anaghị arụ ọrụ. Ọ nyochara ma mesịa chọpụta na ọ bụ waya lousy; Mgbe ọ lechara ọnọdụ ahụ anya, ọ chere na ihe kacha mma ọ ga-eme bụ ịmịcha ezé ya ezé, n’ọtụtụ ụzọ enweghị ọgụgụ isi.
Ma ndozi o mere site na mposi nke igwe mere ka ike nke ọkụ eletrik nke gburu ya dịkwuo elu. Ọnụọgụ nke 8 - Otu esi ewepụ ya na aesụ Na 2002, otu onye ọrụ ugbo nọ na Brazil jere n'ụlọ ya wee hụ nnukwu ụlọ a beeụ dị na ya Chere. Aụ nwere ike ịdị oke egwu ma nwee ike ịnwụ.
N'ihi ya, ọ dị mkpa ịkpachara anya, o mekwara nke ahụ. Nwoke a matara na o choro nchebe site na nsị a beụ ma jiri ya mee ihe iji kpochapụ ebe a beeụ, nke bụ ihe ezi uche dị na ya. Ọ banyere gbaa ndị a beụ ọkụ, mana echiche ya banyere ịgbachitere onwe ya bụ itinye akpa rọba n'isi ya wee mechie ya t n'uko ụlọ.
Nsogbu dị ebe a bụ, akpa rọba agaghị akwụsị ọnya a beeụ, nwoke a adịchaghịkwa ama. Mana ọ na-akawanye njọ n’ihi na o chefuru iku ume, o meghị oghere n’akpa uwe ya ka oxygen wee gabiga, o kudara ume mgbe a theụ ka dị ndụ. Nọmba 7 - Iche echiche Ighaghachi azụ Ọkwọ ụgbọala dị ize ndụ na ihe nwere ike ime ma ọ bụrụ na ịcheghị maka ha, ọbụlagodi dị mfe dịka ebe ị na-adọba ụgbọala.
Otu nwanyị Australia chefuru otu ihe dị ịtụnanya banyere itinye ụgbọ ala ya n'ogige ahụ, nke tara ya nnukwu ego, yabụ kedu ka nke ahụ siri mee? Ọ na-aga ụlọ ahịa nri; ọ chọrọ ịhụ ma ọ nwere akpa rọba. Ya mere, ọ kwụsịrị, pụọ, chọọ ogwe ahụ, mana ọ bụ mmejọ. Ebe ọ bụ na ụgbọ ala ahụ adịghị n'ogige ahụ, ọ malitere ịlaghachi n'azụ ya dị ka ọ dị, na-akụda ya, na-agagharị na ya wee gbuo nwanyị ahụ.
Obi abụọ adịghị ya na ọ kwadoghị ụbọchị ahụ n'ụzọ ahụ. Nọmba nke 6 - Egwuregwu karịrị n'ihi netwọọdband ya na ngwa ngwa zuru oke, ịgba egwu egwuregwu na-ewu ewu na South Korea. A na-emeso ndị na-egwu egwuregwu na ndị ọkachamara na-eme egwuregwu ma na-akwụ ụgwọ dị ka kpakpando egwuregwu.
Ndị na-eme egwuregwu na-eme nnukwu nkwado ma nwee ike ịme ihe karịrị $ 100,000 kwa afọ, agbanyeghị nke ahụ anaghị eme ma a bịa n'okwu Lee. Mgbe otu onye South Korea aha ya bụ Lee nwụrụ mgbe o kwusịrị igwu ihe n’ịntanet were awa 50 wee kwụsịtụ ole na ole. Ọ dara mgbe ọ gwụchara egwuregwu na cafe ịntanetị na Taegu City.
O righị nri ma ọ bụ hie ụra n'oge oge ịgba ọsọ a, naanị ezumike ọ gara bụ ime ụlọ mposi. Y’oburu n’ichoo nsogbu ya na mgbe ahu imara ebe ihe a na aga. Maka na ọ gwụchara awa iri ise ahụ n’achọghị ilebara ahụ ya anya, ọ nwụrụ.
Ndị dọkịta kwuru na ọ bụ ngwakọta nke nkụda mmụọ na ike ọgwụgwụ kpatara ọnwụ ya na mberede. Nọmba 5 - Lava Lamp Bomb Enwere ọtụtụ ụzọ iji chọọ ụlọ mma, mana oriọna na-adị ebe niile na ndị mmadụ n'otu n'otu, mana mgbe ị natara ma kpoo ha ọkụ na mbụ, enwere iwu ụfọdụ ịchọrọ ịgbaso, ọkachasị nwayọ. Philip Quinn dị afọ 24 na-etinye oriọna lava n'otu ọkụ ọkụ ka ọ nwụrụ mgbe ọ gbawara, na-ezipụ otu nnukwu iko n'ime obi ya.
Ndị nne na nna Philip Quinn hụrụ ozu ya na ụgbọala ya na-adọkpụ na Kent. Quinn kwuru na ya zoro n'ime ime ụlọ ya mgbe oriọna ahụ gbawara, ebe ọ nwụrụ. Nọmba 4 - You Nụrụ Ihe Echiche bụ na ihe si n’eluigwe daa wee laa gị n’iyi abụghị ihe ọhụrụ; N’amaghị na ọ bụ helikọpta na-ada gị, agbanyeghị, ị chọghị ka e gbuo gị.
Ma, otu nwa akwụkwọ nọ n’ogbe ahụ nwụrụ na British Columbia mgbe helikọpta dara n’ala, gbuo ya. Ebum n’uche Ajụjụ achọrọ ịza ebe a bụ ihe kpatara na ọ hụghị ma ọ bụ nụ ihe ọ bụla. Azịza ya bụ na ọ nọghị n'ụzọ ziri ezi, yana o nwekwara nnukwu olu isi na ya.
Ndị helikọpta ahụ nwụkwara, ihe ahụ niile mere jọgburu onwe ya. Otu ndụmọdụ ndị ndụmọdụ, etinyela ekweisi gị na olu zuru oke mgbe ị na-eje ije. Onu ogugu ato - Nchacha nke oma Dika odi na mbu, anwuru ulo abughizi ulo na nká.
Nke a bụ n'ihi sistemụ kpo oku ọhụrụ, nke bụ ezigbo mmekpa ahụ mgbe ọ na - ehicha - Marko dị afọ laghachiri n'ụlọ nke aka ya wuo anwụrụ ọkụ. Ngwa nhicha. Thelọ anwụrụ ọkụ dị oke elu maka otu broom dị mfe, mana nke ahụ ga-ezuru ya ma ọ bụrụ na ọ nwere ike kegide ahịhịa ya na yinye wee jiri ihe rịa ya.
N'ụbọchị ikuku na-ekukarị, ọdụ ụgbọ mmiri ahụ gwara ndị na-ahụ maka mmiri ka ha pụọ ​​n'oké osimiri mana ọtụtụ, gụnyere Adrian Monnoyeur, jụrụ, yabụ gaa sọọfụ. Ka ọ nọ na-egwu mmiri, a na-adọkpụrụ ya gafee oke osimiri n'ihe dịka kilomita 160 kwa elekere mgbe oke ebili mmiri buliri bọọdụ ya elu na mbara igwe. Adrian gbawara na Saint-Jean-de-.
Nọmba 1 - Nọrọ na Whengbọ Ala Mgbe ị na-aga njem safari, otu iwu kacha mkpa abụghị ịhapụ ụgbọ ala n'oge ọ bụla belụsọ ma a gwara gị ka emee ya; Nke a bụ maka nchekwa nke mmadụ na anụmanụ. Mana ndị njem nlegharị anya German abụọ mere njem na Spanish safari kpebiri na ha agaghị anụ ọtụtụ ịdọ aka na ntị a na-ekesa na ogige safari wee pụọ n'ụgbọ ahụ ma nwee anụ ụlọ karịa. Ka ha si n'ụgbọala ahụ pụta, otu agụ wakporo ha ma gbuo ya.
Ebe ọ bụ na ha anaghị erube isi n’iwu ahụ, ihe ha ga-akwụ bụ ndụ ha. Nke a bụ nhọrọ anyị kachasị nzuzu nke ndị mmadụ nwụrụ. Gịnị ka unu niile na-eche banyere ya? Ka anyị mara na ihe.
seramiiki ọsọ igwe kwụ otu ebe
Ugbu a enwere m ajụjụ maka gị! Chọrọ ịmalite ọwa youtube dị jụụ dị ka Nwee Amamihe? You chọkwara ihe Nweta ego mgbe ndị mmadụ na - ele gị edemede? Anyị nwere ike inyere gị aka! Maka ozi ndị ọzọ, lee njikọ dị na nkọwapụta nke edemede a. Nke a ewetara anyị na njedebe nke edemede a. Echefula ịpị bọtịnụ Dị ka, ịdenye aha ma gbanye mgbịrịgba ngosi ka ị ghara ịhapụ ihe ọ bụla n'ime akụkọ ọhụrụ anyị.
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na ịnwụgide ị drunkụ mmanya na - egbu egbu?
Nke mbu,yabụ iwu l'ẹke aigwen'okporo ụzọ ma ọ bụ ebe ọhaneze ndị ọzọ ka ị ghara ị alcoholụbiga mmanya ókè. Yabụọ bụrụn'okpuru nduzi nkeụọ ihe ọ .ụ .ụna ọ bụghị na njikwa kwesịrị ekwesị nkeigwe kwụ otu ebe,ị bụna-eme ihe iwe. Otu ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii kwuru, sị: 'Drunkụbiga mmanya ókèna-elekọta nke a pedal okirikiri bụ ihe iwe n'okpuru akwụkwọ ikike na 1872.26bọchị 26 2020
kilomita ole ka m kwesịrị ịgba ịnyịnya ígwè n'ụbọchị
Otu ihe anyị ji enye ihe ngosipụta nke ọrịa Ọrịa prostate bụ ịnwale ọbara ma enwere echiche na ọ bụrụ na ị gbaa okirikiri ọtụtụ ị nwere ike iwe iwe prostate gị na nke a nwere ike ịbụ nyocha ọbara gị nke a na-akpọ PSA nke a na-akpọ ọbara na-eme ka elu dị elu. nwalee nnwale ọbara nke antigen kpọmkwem nke na-erute na ị mere nyocha ọbara ahụ ka ọ dị elu ma nweezie ọtụtụ nyocha ị na-achọghị mgbe ọ bụla n'ihi na ị na-agba ịnyịnya ígwè na nke ahụ abụghị eziokwu, ọ bụghị ya - Enwere ohere ọ enwere ike imetụ gị ntakịrị, mana ọ bụrụ na ị lelee nyocha nyocha nke ụlọ nyocha na ọtụtụ, ọtụtụ akara akara mkpụrụ ndụ maka ọrịa kansa prostate, ịgba ígwè na mmega ahụ enweghị ihe dị iche na nke ọ bụla na-egosi ọrịa kansa prostate, yabụ ịgba ịnyịnya ígwè dị mma You na-akawanye mma, ọ na-eme ka ahụike obi gị na ihe niile na-ebelata ihe ize ndụ nke kansa yana ọ dịghị emetụta ọrịa na-adịghị mma maka ọrịa kansa ma ọ ga n'ihu. N'ụzọ dị mma, ọ dịghị nnukwu ihe ize ndụ nke ọrịa cancer prostate. Ihe anyị kwesịrị ime dị ka ụmụ okorobịa na-eche banyere ya.
ugwu igwe kwụ otu ebe 2016
Mbufo mbiba ẹkeme ndibiere m̀m to ikpakaha m̀m or ididaha. Achọghị m ka ụmụ okorobịa leghara ya anya na nke mbụ. Maka ọtụtụ akụkụ, anyị na-achọta ihe ndị a tupu ụbọchị ndị a ma enwere ike ịhazi ya kpamkpam.
Nwere ike ịnya ịnyịnya igwe na-egbu mmanya UK?
Eeh. Ọ bụ iwe iwegbara ịnyịnya ígwèn'okporo ụzọ ma ọ bụ n'ebe ọhaneze ọzọ mgbe ekwesighinọkwasiruru kaụọ ihe ọ .ụ .ụma ọ bụ ọgwụ ọjọọ.
Ndị na-agba ịnyịnya ígwè nwere ike ịbụ ntakịrị ihe mgbakasị ahụ ugbu a. Echere m, ọ bụghị naanị uwe na-atọ ụtọ ma ọ bụ ụzọ ụgbọ ịnyịnya ígwè, ọ dị ka ha na-eche na ha karịrị iwu mgbe ha na-agagharị n'okporo ụzọ, nwee ohere maka obi nkoropụ na mbilite ha, ọbụnadị eme m ka m gafere ọkụ ọkụ na-awụlikwa elu, Echere m na ọ dị oke egwu, ọ bụghị ya, ọtụtụ ndị chere na ọ bụ ya na ndị mgbasa ozi kwenyere na e nwere ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-eleghara iwu okporo ụzọ anya, na-agbaze n'okporo ụzọ, na-ejighị okpu agha na ekwentị, yabụ enwere ndị na-agba ígwè bụ ịnshọransị na ha nwere ike ịdaba n'ime ụgbọ ala gị ha nwere ike ịdaba n'ime gị. Achọpụtala m igwe kwụ otu ebe na ị na-emewanye ihe ike karịa afọ ndị ziri ezi, na ha enweghị atụ.
Ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-eche na ha karịrị iwu ma ọ dị ihe ọ bụla, yabụ ka anyị bido site na isi mgbe anyị na-ekwu maka ndị na-agba ịnyịnya, gịnị ka anyị bu n'uche na ikike ahụ? nke a ma ọ bụ ọbụlagodi, a na m ekwu ya, ụfọdụ mmadụ dị ka stereotype, mana enweghị n'ezie onye na-agba ịnyịnya, enwere ndị na-agba ịnyịnya igwe ma na-ewere ac yklist bụ akụkụ nke stereotype nsogbu nke ndị na-agba ịnyịnya igwe, ị A naghị ahụ ya dị ka onye na-emegbu mmadụ ma ọ bụ onye a zụrụ azụ ọwụwa anyanwụ, mana enwere nkwenye dị iche iche nke ịbụ onye na-agba ịnyịnya, ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-agba ịnyịnya igwe na-ejikwa usoro ụgbọ njem ndị ọzọ, yabụ ndị na-agba ịnyịnya ígwè adịchaghị iche na ndị ọzọ na ebe ọnụ ọgụgụ ahụ dị abụghị ihe akaebe na ndị mmadụ na-emebi iwu ọtụtụ mgbe na igwe kwụ otu ebe karịa oge ọ bụla ọzọ. Ọtụtụ n'ime ndị na-agba ịnyịnya ígwè ahụ kwuru na ha mere nke a na otu iji mee ka nchekwa nke ndị na-ejikarị ọkụ ọkụ ọkụ n'ihi na ha na-atụ egwu na ọ bụrụ na ihe emee ha tupu oge eruo, ha nwere ike inwe mmekọrịta chiri anya na ụgbọ nke na-anwa inweta ha You nwekwara ike ịnọ n'akụkụ ụzọ maka nke a, mana ọ kachasị nchekwa na ọ bụ ụkpụrụ nchekwa onwe onye. Yabụ ee, ụfọdụ ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-ada iwu ma ọ bụrụgodi na ha mere, ọ kachasị dị egwu.
Mmetụta nke omume a nke ndị mmadụ na-akwa bụ enweghị isi mgbe ị lere anya na ọnụọgụ ị na-ele, ezigbo ihe egwu nke ị kwenyere na ọ nwere ihe ize ndụ nye onye ọ bụla nọ na UK, ihe dị ka mmadụ 1,700 n'ime afọ m gburu n'okporo ámá na ole n'ime ndị ahụ na-enweta igwe kwụ otu ebe na-ejikarị etiti efu na abụọ ha abụghị ndị na-ewu onwe ha dị ka ndị na-agba ịnyịnya ígwè n'ihi na nsogbu dị nro nke otu nwere na-akpachapụ anya ọbụlagodi mgbe ha nọ na ya ma na-akpasu iwe nke a bụ ihe megidere ihe ị na-enweta n'ụgbọala n'ihi na ndị mmadụ nọ n'ụgbọ ala nwere eriri oche, akpa ikuku, mkpuchi kachasị mma, nwere mmetụta dị mma nke na ha nwere ike ịkparị mkparị, anyị maara na ọ fọrọ nke nta ka ịkwụsị ịgba chaa chaa ụfọdụ ndị uwe ojii nwere otu Mee mkpebi mkpebi iji gbado anya obere na-emebi iwu ma tinye uche na ya ntriate ego na ụdị mpụ ndị yikarịrị ka ọ ga-egbu ndị mmadụ ma ọ bụ bụrụ ndị isi edemede 13 afọ na West Midlands Echere m na m nyere ohere ahụ na-agafe ọkụ na-acha uhie uhie na-agbapụ ndị na-agba ịnyịnya na otu n'ime ha agaghị achọ 'enwetabeghị ihe ọ bụla maka ya na ọ chụpụrụ onye ọ bụla, nke pụtara na ọ pụtara na ọ pụtara imebi iwu ịgba ịnyịnya ígwè dị mma m ga-asị mba, ọ nweghị ike iwe iwe, ọ nwere ike? nwere ike na-atụ ụjọ kwa, mana ọ ga-abụ na ọ ga-eyi ndị ọzọ egwu dị egwu n'ihi na ọ bụ ihe na-adịghị njọ, yabụ na ọ bụghị mmadụ niile na-ekwu maka ịgba ịnyịnya ígwè dị egwu, ọ nwere ike ịbụ n'ihi na ndị nọ n'ụgbọ ahụ na-akpọte ha ma ọ bụ na ọ pụtara ntakịrị ihe mana ị gaghị achọpụta onye ọkwọ ụgbọala na-eme 30 na 2001 na ekwentị n'azụ ụkwụ ị maara na akụkụ a na-abịa ihe gbasara ndị ọkwọ ụgbọala anyị nwere ike icheta nwekwara ike ịbụ ndị ọgba tum tum mgbe ha nọ n'ụgbọala, ha na-emebi iwu ma ọ bụrụ na ha eme ya dị ize ndụ taa, mmadụ ise na-anwụ n'okporo ụzọ anyị na 63 na-ata ahụhụ ndụ na-agbanwe mmerụ ahụ na n'ọtụtụ oge mgbe ndị ọkwọ ụgbọ ala na-eme ka nsogbu ndị a dị na mmejọ nke kpatara nsogbu ndị ahụ Nsogbu Ekwentị gị dị iche iche Ọ ga-abụ na ọ bụ maka nnukwu ego niile Nsogbu ugbu a ihe ndị anyị nọ n'ime ọsọ ọsọ abụghị naanị oke ị hụrụ, ọ bụ ebumnuche iji banye n'omume ndị ọzọ ọ na-a drinksụ nke ị drivingụ ọgwụ ọjọọ na ọ dị nwute na ị maara nke ahụ mgbe ị dara, ị maara na ị drinkingụ ụgbọ ala na-arị elu Car na ọsọ nke 30 mph, ọ nwere otu ume ahụ, otu ikike mbibi ahụ dị ka obere ihe mgbawa ị zụtara na ọ bụ ya mere anyị ji mee ka ọha mmadụ gbalịsie ike ga-abanye n'ime ndị mmadụ mgbe ị na-anya ụgbọ ala a, ị ga-ewere ya n'ụzọ ahụ na-eche na na 2016 e nwere ndị ụkwụ 448 nwụrụ n'okporo ụzọ UK na-eche na mgbasa ozi bụ nnukwu akụkụ n'ihi na mgbe anyị nụrụ banyere ihe mere ebe ọ bụ F The Nsogbu Cyclist bụ ihe dị nnọọ obere, ọ bụ nnukwu isiokwu Ọ bụ ihe niile gbasara akwụkwọ ahụ Ọ bụ akụkọ niile na redio na onye ọ bụla maara na onye na-agba ịnyịnya ígwè mere ihe na-adịghị mma na ọ bụ ọdachi mgbe nke ahụ mere, mana ọ dị nwute na ọtụtụ mmadụ anwụọla n'okporo ụzọ anyị kwa ụbọchị n'ihi omume na akpachapụghị anya nke onye na-ebugharị ụgbọala na onye na-ekwughị na enwere ọtụtụ n'ime afọ iri gara aga ma ọ bụ na ọnụọgụ ndị nwụrụ ma ọ bụ merụọ oke ahụ n'ụzọ UK fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara , ma Otutu ndi mmadu noo n'ime ugbo ala na ndi na-agba ugboala nwere mmetụta nke nchedo nchekwa a, dika odi ka ha di oke nsogbu. Ọ bụrụ n'ezie na anyị chọrọ ime ka okporo ụzọ anyị dị nchebe, anyị ga-agbanwe mkparịta ụka anyị na mgbasa ozi na-elekwasị anya n'ịgba ịnyịnya na na ịnya ụgbọ ala, ọ bụghị n'ihi na ndị ọkwọ ụgbọala bụ nnukwu ndị ọjọọ, ọ bụ naanị nghọta nke gụnyere akụkọ ifo na ụgha enyerela aka n'ezie ịgwọ ọrịa. uche na usoro oha na eze ka m chee na anyi kwesiri ikwu okwu obere banyere mmadu ma kwanyere ndi mmadu ugwu ma anyi aghaghi iweghachite azu na ndu anyi nile ma ghota na maka otutu mmadu, obu ndi mmadu kwesiri ga na-agagharị ma na-adịkwu nwayọ na ibe. Daalụ maka ikiri Biko na-amasị na ịdenye aha Hapụ gị kwuru n'okpuru Ma ọ bụrụ na ị na-amasị ihe anyị na-eme, pịa ebe a iji na-akwado ewu
Enwere ike ịgba gị ụgwọ maka ịgba ịnyịnya ígwè?
Onyeịgba ígwèụlọ n'okpuru nduzinwere ikeịbụebubona akpachapụghị anyaịnya ụgbọ alaọ bụrụnwere ikegosi na ha ejirila nke haigwen'echeghị echiche ma ọ bụ na-enweghị ezi uche maka ndị ọzọ n'okpuru ngalaba 2 & 8 nke LTA.Mar 9 2015
Anyị emeela ọtụtụ ederede gbasara ihe ị kwesịrị ịme igwe kwụ otu ebe, mana anyị emebeghị ọtụtụ ihe gbasara ihe ị na-ekwesịghị ime maka chi, kwụsị ime nke ahụ ọbụlagodi na ị nọ naanị gị ma ọ bụ nọ otu ìgwè ị ga-esi na ekwentị gị kwụsị ide ihe mgbe ị na-egwu nnụnụ iwe Ọ dị mma mgbe ọ ga-amụ nke abụọ, mgbe ị na-akwọ ụgbọala na otu ọ na-akparị ịnọ na ekwentị yabụ gbalịsie ike ịghara ịnọ na ekwentị, mgbe ị na-anya ụgbọala nwere mkparịta ụka gị na onye nọ gị n'akụkụ ma nwee ọmarịcha gburugburu, bulie ekwentị gị, anaghị m na igwe kwụ otu ebe m ka na-akparịta ụka ma ọ bụrụ na i kwenyeghi, ekwentị gị adịghị oke ị nwere ike ị nweta ezigbo iji ekwentị gi na igwe kwụ otu ebe na mba belụsọ na ichoro ka ndi uwe ojii soro mgbe ichichi foto maka igwe kwụ otu ebe vhey nwoke na heyhow foto gi a chere m na achoro m enyemaka gi enweghi ike ijide ya aka. achọrọ mkpara ị nwere ike ịlele ma ọ bụrụ na valvụ m kwụkwara n'ahịrị na-esote, ejekwala na mpempe akwụkwọ gị na ịnyịnya ígwè gị mbụ ị ga-amalite ịtụgharị isi, nke abụọ ị ga-emebi gị cleats na ya dị nnọọ anya na-ezighị ezi na nke atọ onye ọ bụla ga na-eche na ị bụ Chris Froome nke na-adịghị njọ ma na ị nwere ike ọ bụghị a na-agba ọsọ? M ga-ada mgbe niile, nye ohere zuru oke mgbe ị na-akwọ ụgbọala ndị gara aga. Ihe ikpeazu ịchọrọ ime bụ ihu ụzọ a na-emeghe ma ọ bụ mmadụ wega n'okporo ámá.Ọ bụ maka ịnye onwe gị oge zuru oke iji meghachi omume, yabụ dịka m kwuru, nye onwe gị ohere na oge Ugbu a nke a na-eme m ọtụtụ ihe ma amaara m ọtụtụ ndị ọkwọ ụgbọ ala ndị ọzọ na-arụsi ọrụ ike mgbe ị nọ n'ụgbọ gị na-esote nwoke ọkwọ ụgbọ ala na-efegharị gafere ị na-agba ume na puffins na naanị nkeji ole na ole ka e mesịrị, ị gafere ha ọzọ n'ihi na enwere m ịfụ ugbu a, anaghị m ekwu na ndị ọkwọ ụgbọala niile na-eme nke a guysfọdụ ụmụ nwoke na-aga n'ụzọ ha naanị iji chụkwute anyị ụmụ nwanyị ma akpọrọ m asị ịbanye na gị.
Ọ dị mma ma ọ bụrụ na ụmụ nwanyị na-eme ngwa ngwa karịa gị, n'ihi na anyị bụ ezigbo ngwa ngwa, ugbu a onye na-esote bụ n'ezie mba-ugbu a, ọ bụrụ na ị nọ n'ìgwè ma ọ bụ soro ndị ọzọ na-anya ụgbọala ma nwee nsusu ọnụ, laghachite azụ ma ọ bụ gbaa mbọ hụ na o doro gị anya ka ị ghara ịkụ ha aka n’ihu iku aka, echekwala ha maka ụzọ obodo mgbe ị nọ n’etiti obodo ndị mmadụ na-aga n’okporo ụzọ. Ndo Hank ahụghị gị ma ọ bụrụ na nri ma ọ bụ ihe ọ drinkụ theụ agwụla gị na draịva ahụ, ikekwe ọ baghị uru ijupụta karama gị na mmiri ma ọ bụ puddle ọ bụ 100 kwesịrị ịchere ụlọ mmanya ma ọ bụ ashop, pụtara na ị nwere ike itinye ihe ọghọm na ịdebe afọ pụọ maka mgbatị ahụ n'izu na-abịa, yabụ hapụ mmiri ruru unyi n'azụ gị, hey nwoke, na mmiri ọ bụla, enwere m oge iji chekwaa, achọghị m ya n'ezie? drinkụọ mmanya na ịnọ na nchekwa echekwara m na ọ dị ọcha n'ezie, atụrụ na-azụ ahịa ha na mmiri ahụ na-adịghị mma ka m wee mara ma ọ bụrụ na ị kwụsịrị, ọ bụ ihe kachasị mma iji mee n'ụzọ ahụ ingbanwe ihe dị mfe gaa ọsọ ọsọ, ọ bụghị nnukwu nsogbu ma ọ bụrụ na ị na-anya naanị, mana n'otu ọnọdụ ị nwere ike isiri gị ike ịnọgidesi ike na ọ nwere ike ime ka onye ọ bụla n'ime ndị na-edebe anyanwụ gị ma ọ bụ ndị agbata obi gị gbalịsie ike ịkwaga wee hụ na ị nọ ọmarịcha ngwongwo dị mfe tupu ị pụọ n'okporo ụzọ maka igwe kwụ otu ebe na ịzụ ahịa gị, ọ bụghị nke ahụ, achọrọ m ịga ụlọ ahịa akuku dị na Okay mana ịzụ ahịa maka ọla ma ọ bụ uwe na-adịghị mma, ha agaghị enwe ekele maka gwọọ ịnyịnya ígwè gị nwere ike imebi iwu okporo ụzọ dị ka ịwụsa ebe ụzọ gafere, hapụ ọkụ ọkụ uhie ma echekwala na ntịka ịnyịnya ọhịa na-eche obere sekọnd ka ọkụ wee gbanwee akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Nke a bụ ndepụta anyị maka ihe ndị ị na-ekwesịghị ime mgbe ị na-apụ na igwe kwụ otu ebe.
Ugbu a, ọ bụrụ na ị nwere ihe nke gị ịchọrọ ịkọrọ anyị, mee ka anyị mara na ngalaba ndị dị n'okpuru ebe a ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị na edemede a biko kesaa! nnukwu mkpịsị aka ukwu ma ọ bụrụ na ị naghị eme nke ahụ na igwe kwụ otu ebe, emela ya
Can nwere ike ịlafu ịnya ụgbọ ala ịnya ụgbọ ịnyịnya na-egbu mmanya?
Ihentaramahụhụnke ịgba ígwèn'okpuruihemmetụta
Akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala gịenweghị ike ịkwado ya.IheNdị uwe ojiigayikarịrị ka nyochaaiheonye gbara igwe naọ bụrụ na hachereiheonye na-agba ígwè bu nsogbukaya na / ma obu ndi ozohanwere ike ijide ya ma ọ bụiheonye na-agba ígwègakpachara anya ma ọ bụ chee ntaramahụhụ.07.12.2016
Nwere ike ịnya nnụnụ mmanya na-egbu?
Shouse Iwu Group »CaliforniaBlog »DUI»Nwere ikeEnwetara m DUI na wayo ma ọ bụNnụnụe-skuta naCalifornia? Eeh, ọ ga - ekwe omume ịba DUI maka ịrụ ọrụihee-skuuta n'okpuru ọgwụ ọjọọ ma ọ bụ mmanya. Ọtụtụ steeti nwere iwu DUI metụtara ndị na-anya moto. Nke a gụnyere Wayo ma ọ bụNnụnụe-scooters.02.26.2020
Onye na-agba ịnyịnya ígwè nwere ike ịnweta akara?
Ị nweghị ikenweta ihena ikike ịnya ụgbọ ala gị makaịgba ígwèmmejọ.Ogbogu Okonji
esi amalite ịgba ígwè
Kedu oke mmanya mmanya ịgba ịgba?
N'adịghị ka ịkwọ ụgbọala na-a drinkụ, enweghị elummanya oken'ihi na mmanya na-egbuịgba ígwè, na agbanyeghị na ndị uwe ojii nwere ike ịrịọ maka ule iku ume, Mr Farrell na-akọwa nke ahụndị na-agba ígwènwere ike ịjụ nke a.04.26.2019
Ọ bụ iwu na-akwadoghị ịnya ịnyịnya igwe n’enweghị okpu UK?
Enweghị iwu ndị Britain ịmanye ndị na-agba ịnyịnya, nke ọgbọ ọ bụla, iyiokpu aghamgbe ị na-agba ịnyịnya ígwè, ọ bụ ezie na Usoro Highway na-atụ aro na ndị na-agba ịnyịnya ígwè kwesịrị iyi okirikiriokpu agha'Nke kwekọrọ ugbu a ụkpụrụ, bụ ndị ziri ezi nke na ntukwasi-obi ke fastened.'
Nwere ike ida ikike ịnya ụgbọ ala gị maka ị drunkụbiga mmanya ókè?
Akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala gịenweghị ike ịkwado ya.IheNdị uwe ojiigayikarịrị ka nyochaaonye na agba igwenaọ bụrụ na hachereonye na agba igwebụkaihe ize ndụ nye onwe ya na / ma ọ bụ ndị ọzọhanwere ike ijide ya ma ọ bụonye na-agba ígwè gakpachara anya ma ọ bụ ihukaeziDec 7 2016
Walking na-a walkingụbiga mmanya ókè?
Enweghị BAC makana-eje ijen'imeNA. Enwere ike ijide gịụbiga mmanya ókèn'ihu ọha ma ọ bụrụ na ọ pụtaara onye uwe ojii nwudoro na ị bụ n'eziokwuụbiga mmanya ókèn’ihu ọha.
Kedu ihe kpatara iwu akwadoghị ịgba ịnyịnya ígwè mgbe ị na-a drunkụbiga mmanya ókè?
Ikpuchido nchedo ọha bụ ebumnuche bụ isi nke iwu DUI na igwe DUI ga-ewetara ọha na eze ihe egwu karịa DUI ụgbọ ala. Yabụ, enwere ike, ndị ọka ikpe nwere ike ịdị nwayọ na DUI ebe onye omekome ahụ nọ n'ụgbọ.
Mmadụ nwere ike ịnweta DUI mgbe ọ na-agba ịnyịnya ígwè?
Ndị a bụ ụfọdụ isi ihe gbasara otu esi ejide mmadụ maka DUI mgbe ọ nọ n'ụgbọala. N'ọtụtụ steeti ebe ị nwere ike ịnweta DUI na igwe kwụ otu ebe, ọ bụ n'ihi ụzọ iwu obodo DUI si akọwa 'ụgbọ.' N'ọtụtụ steeti, iwu DUI metụtara naanị ụgbọ ala, nke anaghị agụnye ịnyịnya ígwè.
Enwere ike ibo mmadụ ebubo ịgba ịnyịnya ígwè n'okpuru ọgwụ ike?
Chargegwọ ahụ ga-abụ maka 'ịgba ịnyịnya ígwè n'okpuru mmanya na-egbu ma ọ bụ ọgwụ ike', ị ga-abụrịrị ikpe mara nke a ma ọ bụrụ na ikwesighi ịgafe mmanya ma ọ bụ ọgwụ ike - ya bụ, n'okpuru mmanya ma ọ bụ ọgwụ oke nke enweghi ike ijide akara nke okirikiri.